प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख गरिएका चार घोडसवार अनि तपाईं
प्रहरीधरहरा | सङ्ख्या ३ २०१७
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन काजाक काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तोक पिसिन तोजोलबल त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मबुन्डा मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिजो म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
आवरण लेख | चार घोडसवार—तिनीहरूको सवारीले तपाईंलाई कस्तो असर गर्छ?
चार घोडसवार अनि तपाईं
तिनीहरू तीव्र गतिमा अघि बढ्‌दै छन्‌, तिनीहरूको वेग कुदाइले गर्दा आएको आवाज मेघ गर्जेको जस्तै छ! चार वटा बलिया घोडा र तीमाथि सवार गर्नेहरूले दृश्यलाई एकदमै जीवन्त बनाइदिएका छन्‌, यस्तो लाग्छ तिनीहरू बाइबलका पानाहरूबाटै बाहिर निस्केर आउँछन्‌! पहिलो घोडा सेतो छ र यसमा सवार भएका व्यक्ति भर्खरै अभिषेक भएका महिमित राजा हुनुहुन्छ। उहाँको पछि-पछि चहकिलो रातो रङ्‌गको घोडा आउँदै छ जसमा सवार हुनेले पृथ्वीबाट शान्ति हरण गर्छ। त्यसपछि कालो रङ्‌गको तेस्रो घोडा देखा पर्छ। यसमा सवार हुनेको हातमा एउटा तराजु छ। यसले अत्यावश्यक खाद्यान्नको अभाव हुने कुराको सङ्‌केत दिन्छ। चौथो घोडा फुङ्‌ग उडेको पहेंलो रङ्‌गको छ। यसले रोग र अरू घातक महामारी हुने कुरालाई बुझाउँछ जसमा सवार हुने व्यक्तिको नाम मृत्यु हो। यसको पछि-पछि चिहान आइरहेको छ जसले थुप्रै मानिसहरूको प्राण लिंदै छ!—प्रकाश ६:१-८.
“पहिलो पटक चार घोडसवारको विषयमा पढ्‌दा मेरो मुटु नै काम्यो। परमेश्वरको न्यायको दिन छिट्टै आउँछ र आफू त्यसको लागि तयार नभएकोले मर्छु जस्तो लाग्यो।”—क्रिष्टल।
“भिन्नाभिन्नै रङ्‌गको घोडामा सवार चार व्यक्तिको विवरण मलाई एकदमै रोचक लाग्यो। यो दर्शनको अर्थ बुझेपछि एकदमै खुसी लाग्यो।”—एड।
के तपाईं प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख गरिएका चार घोडसवारबारे क्रिष्टलले जस्तै महसुस गर्नुहुन्छ? अथवा एडले जस्तै महसुस गर्नुहुन्छ कि? जे होस्, यी चार घोडसवारको रोमाञ्चक विवरण बाइबलको अन्तिम पुस्तकमा उल्लेख गरिएका दर्शनहरूमध्ये एक चर्चित दर्शन हो। यो दर्शनको विषयमा बुझेर तपाईंले पनि व्यक्तिगत रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। तर कसरी? भविष्यवाणीको यस पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू पढ्‌दा, त्यसबाट सिक्दा अनि त्यसैअनुसार आफ्नो जीवन बिताउँदा तपाईंले साँचो आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।—प्रकाश १:१-३.
केही मानिसहरू चार घोडसवारको दर्शनबाट भयभीत हुन्छन्‌ तर यो तपाईंलाई त्रसित बनाउन बाइबलमा लेखिएको होइन। वास्तवमा लाखौंले यो दर्शनले आफ्नो विश्वास बलियो बनाएको र उज्ज्वल भविष्यको आशामा ध्यान दिन मदत गरेको महसुस गरेका छन्‌। यसले तपाईंलाई पनि मदत दिन सक्छ। कृपया यसपछिको लेख पनि पढ्‌नुहोस्।
आवरण लेख चार घोडसवार अनि तपाईं
आवरण लेख चार घोडसवार—तिनीहरू को हुन्‌?
अर्को एउटा प्रमाण
बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ म बेसबलविना बाँच्नै सक्दिनथें!
तिनीहरूको विश्वास अनुकरण गर्नुहोस् “तिमी हेर्नमा सुन्दरी छौ”
प्रकाशको पुस्तक—यसको अर्थ के हो?
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा सङ्ख्या ३ २०१७ | चार घोडसवार—तिनीहरूको सवारीले तपाईंलाई कस्तो असर गर्छ?
सङ्ख्या ३ २०१७ | चार घोडसवार—तिनीहरूको सवारीले तपाईंलाई कस्तो असर गर्छ?
प्रहरीधरहरा सङ्ख्या ३ २०१७ | चार घोडसवार—तिनीहरूको सवारीले तपाईंलाई कस्तो असर गर्छ?